Global Voices teny Malagasy » Manoratra Bilaogy momba ny Andro Iraisam-pirenena Hiadiana amin’ny SIDA · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Avrily 2018 20:38 GMT 1	 · Mpanoratra Solana Larsen Nandika miora
Sokajy: Afrika Mainty, Amerika Latina, Azia Atsimo, Karaiba, Bangladesh, Brezila, Jamaika, Kenyà, Malawi, Fahasalamàna, Mediam-bahoaka, Tanora, Vehivavy sy Miralenta, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT)
Nanamarika ny Andro Iraisam-pirenena Hiadiana amin'ny SIDA  tamin'ny fitenenana ampahibemaso sy mafy mikasika ny VIH SIDA ireo bilaogera manerana izao tontolo izao ny voalohan’ny volana Desambra. Fanomezam-boninahitra ny ady amin'ilay valanaretina, izay mihamatanjaka noho ny fahanginana sy ny fampahalalàna diso, ny lahatsoratra rehetra navoaka tamin’izany.
Tao Malawi, nizara tsiaro  iray tamin'ny tafatafa voalohany indrindra niarahany taminà vehivavy iray tsy nanafina ny fitondrany ny tsimokaretina VIH i Victor Kaonga, mpanoratra sady mpanao gazety ao amin’ny Global Voices:
Ao Bangladesh, namorona andianà petadrindrina mampiseho firaisana ara-nofo azo antoka misy an’i “Mr. Bunny”, kilalao mitazona fimailo fametaka amin'ny fitaratra anaty fiara, i Kathryn B. Ward , mpahay fiarahamonina sy mpikatroka mafàna fo momba ny SIDA. Toy izao ny soratra amin’ilay petadrindrina amin'ny teny Bangla: “Manana fimailo sy vola aho. Andao hiray ara-nofo. Mampiasa fimailo foana ny bitro kinga saina.”
Namorona sarintany iray afaka kitihina  misy ny asa fanaovangazetin'ny Local Voices momba ny fahasalamam-bahoaka sy ny VIH/SIDA maneran-tany ny Internews. Manasongadina ny tantaran’ireo mpanao gazety izay nandalo fiofanana hanaovana tatitra ampahibemaso mahakasika ilay krizy, sy feo sy soratra avy any Azia, Afrika ary Eoropa Atsinanana izany.
Namorona vohikala haino aman-jery kanto antsoina hoe Heroes of HIV in the Caribbean  (Ireo Mahery Fo miady amin’ny VIH ao Karaiba) ny Ivontoerana Pulitzer ho an'ny Fitaterana ny Krizy .
Nahavita namadika ny loza ho tantara fitolomana ho velona i Brezila, na dia avo tokoa aza ny tahan'ny VIH nisy tao aminy. Nanome antoka ny fanomezana ARV (fanafody hiadiana amin'ny virosy mivadika) ho an'ny olona rehetra izay mila izany ny governemanta breziliana hatramin'ny taona 1996. Milaza ilay bilaogera Olhares da Stelinha  (pt) fa tsy ampy raha io fitsaboana io fotsiny:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/16/117438/
 Andro Iraisam-pirenena Hiadiana amin'ny SIDA: http://en.wikipedia.org/wiki/World_AIDS_Day
 nizara tsiaro: http://ndagha.blogspot.com/2007/12/my-journalism-encounters-on-aids.html
 Kathryn B. Ward: http://pagolnari.blogspot.com/2007/12/day-seven-1-dec-world-aids-day-talk.html
 sarintany iray afaka kitihina: http://www.internews.org/bulletin/monthlynews/lb_2007_11ex.html
 Heroes of HIV in the Caribbean: http://alt.coxnewsweb.com/palmbeachpost/hiv/index.html
 Ivontoerana Pulitzer ho an'ny Fitaterana ny Krizy: http://www.pulitzercenter.org/showproject.cfm?id=51
 Olhares da Stelinha: http://olharesdestellinha.blogspot.com/2007/11/dia-mundial-de-combate-aids-sida-click.html